Ninkii Isla Fadhiyay | Doodwadaag waa Danwadaag.
Illinka hore ee maqaaxida ayuu fadhiyaa, Lugbaa kursiga uu ku fadhiyo u Saaran, lugna waa u fidsantahay. Gacan dhafoorka hore ayuu Ku dhejiyay gacanna illaa ruuggay u siiddaysantahay, oo sigaar sii dhsmmaanayaa faraheeda uga lusha.
Mar sigaarkuu hoos u eegaa. marna horaydiisuu indhaha La raacaa oo hawada furan ayuu feker iyo fiirin kula haasaawaa. Da’ ahaan Afartankii ayuu Ku dhowyahay, dul ahaanse diif iyo daryeelxumo ayaa dhuujisoo dhinacyadiisa isku dhejisay.
Muuq aamusnaan kugula sheekaysanaya ayuu leeyahay. Haddaadse codkiisa maqasho in mawjaduhu isaga dhex yaacsan yihiin ayaad u malaynaysaa. Waan kusoo leexday si aan u qaato kursi bannaan oo dhinaciisa yaallay.
“Walaal kursiga ma qaadan karaa?” ayaan waydiiyay anigoo u malaynaya in ay Cid dhinaciisa fadhido oo ay kursiga usoo laabanayso.
“Sow uma jeedid inaan lagu fadhin? Maxaad ii waydiinaysaa, maad qaadato!” sidaas ayuu iigu jawaab ceshay. Caro iyo ciil inuu su’aashayda ka qaaday oo aan duni ka qasayna waa ii muujiyay.
“Walaal waxaan is iri, amuu qof kula fadhiyay oo uu soo laabanayaa. Sidaas baan kuu waydiiyay.” Hadalkaas ayaan Ku tuuray oon is iri, bal Ku yara deji.
Intuu dhoolla-caddayn ay kamuuqato inuu si dhib leh isaga keenayo u dhoolla-caddeeyay, ayuu igu dhahay. “Adeer Aniga laylama fariisto, ani uun baa isla fariista.”
Kursigii ayaan soo qaatay oo dhalinyaro gees fadhida dhinac dhigtay. Haddaan fariistayba, Ninka Xogtiisii ayaan raadinteeda billaabay, waxaan dhalintii mid ka mid a Ku salaamay. “Ninka halkaa fadhiya miyaad garanaysaa.?”
Qeexid-qabiil markii layga siiyay ayaa ta qofnimadiisana laygu soo koobay. “Wuu waalanyahay oo xoogaa madaxaa lagaga jiraa.”
Markaasaan hadalkii dafay oon lasoo booday. “Dadka isagaa ugu fiyow, suu in uu qofku isla fariisan karo ayuuu ogyahay.”
Illaa iyo hadda ninkaas markaan arko sidii buu isu la fadhiistaa oo uu naftiisa ula haasaawayaa……..Ninkii isla fadhiyay. Ninka isla fadhiya isaga ayaan ka hadlayaa…
F/G Sawirkaan muuqaal ahaan si dhaba ugama turjumayo sheekada.
Qalinkii: Cabdifataax Cilmi Daahir